‘कलाकारलाई राजा वीरेन्द्रले जति माया र सम्मान कसैले गरेनन्’ « Mero LifeStyle
सन्दर्भ: राजदरबार हत्याकाण्ड
‘कलाकारलाई राजा वीरेन्द्रले जति माया र सम्मान कसैले गरेनन्’
सरिता थारू	||2June, 2021
दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २० वर्ष पूरा भएको छ । २०५८ साल जेठ १९ गतेका दिन भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो । यो हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासको सबै भन्दा चर्चित घटना हो । राजा वीरेन्द्रको मायालु स्वभाव र सबै प्रति समान व्यवहारले सबैको मन जितेको थियो ।
गीत संगीत प्रेमी रहेको र कलाकारलाई माया र सम्मान गर्ने राजा रहेको त्यतिबेला उनी निकट कलाकार बताउँछन् । त्यसो त त्यतिबेला दरबारमा राजासँग बिताएका क्षणहरु कतिपय कलाकारको मन मस्तिष्कमा ताजा छन् । ती पललाई कसरी सम्झन्छन् त कलाकार ? यही विषयमा राजा वीरेन्द्रसँग निकट रहेका कलाकारको भनाई जस्ताको तस्तै:
जयनन्द लामा, गायक
वीरेन्द्र राजा भन्दा पनि एक विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यतिको विद्वान व्यक्ति धर्तीले पाउन गाह्रो हुन्छ । राजसंस्थाको हुकुमी शासन हुन्छ गाह्रो हुन्छ भनिन्थ्यो तर, राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यस्तो शासन थिएन । उनका छोराहरु पनि त्यत्तिकै राम्रो हुनुहुन्थ्यो । म पनि केही समयकालसम्म उहाँहरुसँगै अत्यन्तै नजिक थिएँ । साथै, रेडियो नेपालमा लोकगीत प्रबन्धक भएर जागिर पनि खाएँ । तर, बहुदल आएपछि मलाई २०४६ सालमा मण्डले भनेर रेडियो नेपालको जागिरबाट निकाले ।
पदमुक्त गर्दाको कागज अझै मसँग छ । ‘रेडियो सेवा समितिमा हाल लोकगीत प्रबन्धक भई कार्यरत जयनन्द लामा निजले पञ्चायती गतिविधिमा संलग्न देखिएकाले श्री ५ को सरकार प्रजातान्त्रिक सरकार रहुन्जेलसम्म निज लामालाई कुनैपनि पदमा रहि काम कारवाही गर्न अयोग्य ठहराइ बर्खास्त गरिएको छ ।’ यो चिठी बेला–बेलामा मैले अझै पढ्ने गर्छु । तर, राजा वीरेन्द्रको मृत्यु पश्चात् जनताले एकदमै दुःख पाएका छन् । उहाँ भएको भए जनताले यति दुःख पाउने थिएनन् होला । राजा वीरेन्द्र प्रति समावेदना छ । उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् । तपाईलाई नेपाली जनताले अझै पनि बिर्सेको छैनन् ।
मिलन मोक्तान, संगीतकार
गीत सगीतका शौखिन राजा वीरेन्द्रको नरम स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । वीरेन्द्र सरकारसँग धेरै कार्यक्रममा हातेमालो गर्ने मौका पाएको थिएँ । उहाँ हुनु भएको भए देश अझै समृद्ध हुन्थ्यो होला । मैले उहाँको ७ वर्षसम्म निरन्तर जन्मोत्सवमा सहभागि हुने मौका पाएको थिएँ ।
जन्मोत्सवको अवसरमा देशभरका कलाकारलाई बोलाएर ‘राष्ट्रव्यापी लोक नृत्य प्रतियोगिता’ आयोजना हुन्थ्यो । उहाँको जन्मोत्सवमा सबै राजपरिवार नै आउनुहुन्थ्यो । मैले पनि उहाँलाई मेरा कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्थें २०५२–०५३ पछि प्रत्येक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो ।
दरबारको स–सानो कार्यक्रममा पनि बोलाइरहनु हुन्थ्यो । साँच्चै भन्दा साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो । भेट्दा अंगालो हाल्नुहुन्थ्यो ।
सन् १९९९ मा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) काठमाडौँमा भएको थियो । यस खेलको दौरानमा हामी झन् नजिक भएका हौं । सागमा देशको संस्कृति चिनाउने शोको मलाई डाइरेक्टर बनाउनु भएको थियो । मैले उहाँसँग पाँच छ वर्षसँगै काम गर्ने मौका पाएको थिएँ ।
कुमार बस्नेत, गायक
राजा वीरेन्द्र लोक गीत–संगितमा एकदमै शौखिन हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गर्दा नै नेपाली लोक संगीत माथि उठेको हो । त्यतिबेला राजाले कलाकारलाई कति मानमर्यादा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले कसले गर्छ ? झलकमान गन्धर्व, लाल बहादुर खाती, लाल बहादुर गन्धर्व राजाका मनपर्ने गायक थिए । साथै, हाम्रो लोकगीतलाई पनि उत्तिकै मन पराउनुहुन्थ्यो ।
उहाँ उपस्थित हुनुभएको धेरै कार्यक्रममा गार्यौं । धेरै नजिक बसिएन तर हाम्रो गीतहरु सुनेर राम्रो लागेको खण्डमा धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो । मलाई पनि दरबारमा बोलाइरहनुहुन्थ्यो ।
१० दिन बढ्यो निषेधाज्ञा, के खुकुलो केमा कडाइ ? « Mero LifeStyle
‘बिरामीको खुशीले पीपीईमा गुम्सिएको पीडा त्यसै हराउँछ’ « Mero LifeStyle